Kenya oo Gorgortan Siyaasadeed gelineysa Xeryaha ay Qaxootiga Somaalida ku jiraan - Awdinle Online
Kenya oo Gorgortan Siyaasadeed gelineysa Xeryaha ay Qaxootiga Somaalida ku jiraan
Dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay albaabadda u laabi doonaan Xerooyinka Qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma oo ay Kumanaan Qaxooti Soomaali ku noolaayeen tan iyo sanadkii 1991-kii.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Dr. Fred Okengo Matiang’I waxa uu ku wargeliyey Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR in muddo 2 isbuuc lagu xiro Xerooyinka Qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo ku yaalla Gobalka W/bari ee Kenya.
Qoraal uu shalay u diray Madaxa Xafiiska UNHCR ee Kenya, Fadhilaa Addala ayuu ku sheegay inaysan jirin Fursad kale oo wada-xaajood dheeraad ah oo laga galayo go’aanka la xiiira in albaabadda loo laabo Xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma.
Ma aha markii ugu horeysay oo ay Dowladda Kenya ku dhawaaqdo Go’aan lagu xirayo Xeryahaasi, waana Isku-daygoodii Labaad ee ay ku doonayaan inay ku xiraan Xeryahaasi iyo in Qaxootiga dib loogu celiyo dalkooda hooyo.
Sanadkii 2016-kii waxay Dowladda Kenya ku dhawaaqday qorshe lagu xirayo Xeryaha Qaxootiga, balse Hay’addaha Xuquuqda Aadanaha ayaa ku eedeeyey inay Dowladda Kenya xoog u adeegsanayaan sidii ay Qaxootiga Soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda hooyo.
Kenya waxay horey u marti-gelisay ku-dhawaad 600,000 oo Qaxooti iyo Magan-gelyo-doonayaal, kuwaasi oo ay 350,000 ka mid ku sugan yihiin Xerada Dhadhaab.
Si kastaba ha ahaatee, Go’aanka ay Dowladda Kenya ku gaartay in la xiro Xeryahaasi ayaa waxay uu gol leedahay Gorgortan Siyaasadeed, kadib markii ay Guul-darada iyo Weji-gabaxa kala kulmeen Garmaqalkii Maxkamadda ICJ ee ku aadan sheegashada Kenya ee qeybo ka mid ah Xuduud-baddeedka Somalia.
Previous articleQarax ka dhacay Muqdisho iyo Sarkaal ku dhintay
Next articleCabdirashiid Janan oo kulamo ka bilaabay degmada Doolow